OZU adịghị na 737 multi pak maka Prepar3dv4
ajụjụ OZU adịghị na 737 multi pak maka Prepar3dv4
1 afọ 5 ọnwa gara aga - 1 afọ 5 ọnwa gara aga #733 by spilok
Na 737 pak maka prepar3dv4, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma ma e wezụga mgbe ịpị akara ngosi redio. Naanị nnukwu nwa ntancha. Kedu ụzọ iji mee ka redio gosi?
Ps. Nke a na - eme na Boeing 717 pak
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 5 ọnwa gara aga spilok.
1 afọ 5 ọnwa gara aga #734 by Dariussssss
Biko ị nwere ike ịme nke a na P3D Forum ebe a?
Nke a bụ banyere FSX na FSX Steam.
1 afọ 5 ọnwa gara aga #736 by rikoooo
Enweela m isiokwu ahụ gaa n'aka nri.
Ọ bụrụ na akara ngosi redio anaghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịnweta ya site na menu ngwá ọrụ.
1 afọ 5 ọnwa gara aga #738 by spilok
Mba ... ị nweghị ike ịnweta redio n'ebe ahụ. Ọ ka na-acha oji.
Emere m obere nyocha, ebe ọ bụ na ndị a bụ Boeings si FSX ma gbanwee P3d, o yiri ka m si na mberede ehichapụ GAUGE ma ọ bụ ihe maka redio na Boeings. Nwere ike ịbụ faịlụ CAB, amaghị.
Olileanya, onye nwere ike inyere m aka weghachi nlele a. Enwere m obi ụtọ na faịlụ Boeing na Rickoooo ma na-amasị m iji ha na Prepar3dv4.
1 afọ 5 ọnwa gara aga - 1 afọ 5 ọnwa gara aga #739 by rikoooo
Mgbe ahụ, ngwá ọrụ anwansi a bụ maka gị: Nrụpụta Mgbapụta Na-enweta Ngwá Ọrụ http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/73/256
Ka m mara ma ọ na-enyere aka
Ntọala ikpeazụ: 1 afọ 5 ọnwa gara aga rikoooo.
1 afọ 5 ọnwa gara aga #740 by spilok
Daalụ. M gbalịrị ka o si n'ọbá akwụkwọ AVSIM. Achọtara m njikọ gị wee gbalịa ọzọ, ma ọ dịghị LUCK. N'agbanyeghị nnukwu agba agba ojii na-enweghị redio ọ bụla na FSX Boeing ọ bụla.
M na-eche ma ọ bụrụ na ị na-akpọgharịrị nkwadebe Prepar na ikwe ka ọ wughachi ga-eme ihe ọ bụla? Echere m na ọ dị mma ime dịka m mere na FSX?
1 afọ 4 ọnwa gara aga #767 by spilok
Ihe niile dị mma, ugbu a. Ntinye ntinye kpochapụrụ ihe niile.
Oge ike page: 0.136 sekọnd